व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने चिकित्सकको यस्तो सुझाव « Lokpath
२०७७, ११ मङ्सिर बिहीवार १३:५२
व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने चिकित्सकको यस्तो सुझाव
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ मङ्सिर बिहीवार १३:५२
काठमाडौं । व्रत गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि फाईदाजनक छ । तर व्रत सकिएपछि मानिसहरु खान नहुने कुराहरु बढी खाएर पनि बिरामी पर्ने गरेका छन् । त्यसैले लोकपथले चिकित्सकको सल्लाहमा व्रतालुले के खाने के नखाने भनेर सोधी केहि टिप्स जम्मा पारेको छ ।
दिनभरको व्रत सकिएपछि व्रतको दिन बेलुका अन्न खान नहुने भनिन्छ । तर फलफूल र झोलयुक्त पदार्थ भने खान धार्मिक छुट छ । व्रतको दिनमा प्रशस्त पानी, फलफूल र फलफुलको जुस खान सकिन्छ । व्रत बस्दा निराहार बस्दा राम्रो भएपनि स्वास्थ्यमा समस्या हुनेले यी झोलिलो कुरा खानुहोला । दिनभरको भोको पेटले तत्काल कडा खाना पचाउन सक्दैन । यी खानेकुरा खान चिकित्सकले सुझाएका छन् ।
-लामो व्रतपछि एकैपटक धेरै खानेकुरा खाँदा शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएर मानिस बेहोस हुन सक्छ । ठोस खाना मात्रै होइन, पानी पनि एक्कासि धेरै पिउनुहुँदैन । पहिले थोरै खाएर केही बेर आराम लिएपछि फेरि खानु उपयुक्त हुन्छ ।
-सीधै पानी पिउनुभन्दा सलादबाट पाइने पानीले धपेडीमा फाइदा गर्छ ।
-व्रत सकिएपछि आँटाको रोटि बनाई आलूसँग खान सकिन्छ ।
-व्रतमा साबदाना शुद्ध दुध मिलाएर शुद्ध परिकार बनाएर खाँदा आडिलो हुन्छ ।
-व्रत बस्दा दुधमा बदाम भिजाएर पनि खान सकिन्छ ।
-व्रतको दिन वा सकिएपछि केहि छिन रिलिफको लागि कोल्ड डिंक लिने बानी छ भने त्यसले मुटुमा गम्भिर खतरा पैदा गर्छ ।
-खाली पेटमा तत्काल चिया पिउनु पनि ठीक होइन ।
-मसलेदार खाना खानु राम्रो हुँदैन ।
-रोटी, दाल, भात र तरकारी नै उत्तम हुन्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेट हुने भएकाले शरीरमा तागत पनि दिन्छ । खानासँग सलादको मात्रा धेरै खानुपर्छ
-व्रतबस्दा चिल्लो–पिरो खानुहुँदैन ।
-गर्भवती महिला व्रत नबसेको राम्रो हुन्छ । मुटु, कलेजो, फोक्सो , मृगौला ,मधुमेह, उच्च रक्तचापका समस्या भएकाले ब्रत बस्न हुदैन । यसबाहेक स्वास्थ्यअवस्था राम्रा भएकाहरु महिनामा एक दुईपटक वा हप्तामा एक दिन व्रत बसेको राम्रो हुन्छ ।
मानव शरीरको करिब ९० प्रतिशत रोग मुखको स्वास्थ्य समस्याका कारण हुने विज्ञको दाबी
काठमाडौं । तपाइ मुख स्वास्थ्यबारे कत्तिको सजक हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है मानव
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ४० जनामा कोरोना संक्रमण, ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं – नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ४० जनामा कोरोना संक्रमण
होसियार ! कतै तपाई गल्ती त गर्दै हुनुहुन्न ? खानेकुरा सम्बन्धि जान्नैपर्ने केही भ्रम र यथार्थ
आजभोलि नयाँनयाँ रोगका नामहरु सुनिन्छन् जसकारण मानिस दिनानुदिन रोगी बन्दै गएको छ ।
शनिवारको छुट्टीमा बच्चाहरुलाई सिकाउनूस् यस्ता कुरा…
काठमाडौं । आज शनिवार । अधिकांश शैक्षिक संस्था तथा कार्यालयहरु विदा हुन्छन् ।